Blogging- Kuwana Mari Kubva Yako Blog saiti - TMC App
Blogging- Kuwana Mari Kubva Yako Blog saiti
Inogona zvakare kuve nzira yakanaka yekuwana madhora akati wandei. Mawebhusaiti eBlog anobvumidza iwe kuti ugadzire chaizvo mari. Kunyangwe pasina nguva dzose inovandudzwa, bhurogi rako rinogona kukuitira mari.
Parizvino, pane parizvino nhamba yakakura yemablog anga achigadzira mihoro zuva rega rega, zvekuti mablogiki akarishandura kuita nzira yavo yekutanga yekuwana mari nekuda kwekuti vari kuwana mari yakawanda kupfuura zvavanoita. nzvimbo yebasa. Basa racho rakanyanya nyore uye unogona kuzviita kunyange pamiganhu yeimba yako. Ini ndakanyatso taura kuti iwe unofarira kunzwisisa zvakavanzika zvavo. Heano maitiro aunoita mari kuburikidza neblog mawebhusaiti.
Nzira inonyanya kufarirwa yekuwana mari kubva kubhurogi yako saiti ndeyekusanganisira zviziviso mairi. Iwe unogona kungodzvanya pane iyo Monetizing tab uye woona kuti zviziviso zvicharatidzwa paibhurogi rako saiti. Kana iwe usina Blogspot account, unogona kungokopa bhuroka rekodhi uye unamira mune widget kana munzvimbo mune yako blog.
Mumwe mukana wekuti iwe ukwanise kuita mari kuburikidza neblog rako saiti ungabva kune vanotsigira. Aya ndiwo mabhureki uye zvitoro zvinoda kushanda pamwe newe kuti zvinongedzo kana kushambadzira zviratidzwe mune yako blog saiti. Ivo vanowanzo email mablog mawebhusaiti ane maitiro akafanana esangano ravo uye vanowanzo tsigira iyo blog saiti nzvimbo.
Parizvino, kwatove neakawanda nzira dzekugadzira mari kubva kubhurogi rako. Vatsigiri uye kushambadzira ndezvishoma zvedzimwe nzira dzaungafunga nezvadzo kuti uwedzere kugona kwayo. Saka zvinopfuura kuigadzira uye kuigovana online blogs mikana inotyisa yekuti iwe uite imwe mari yekuwedzera.
Kunyangwe pasina kukwidziridzwa kunoenderana, yako blog saiti inogona kuita mari iwe.
Parizvino, kwatove nenhamba hombe yemablog masaiti anga achigadzira mari zuva rega rega, zvekuti vanoblogi vakanyatsoishandura kuva nzira yavo yekutanga yekuwana mari sezvo vari kuwana mari yakawanda kupfuura zvavanoita muhofisi. Nzira inonyanya kufarirwa yekuwana mari kubva kubhurogi yako saiti ndeyekuisa zviziviso mairi. Imwe nzira yekuti iwe ukwanise kuwana mari kuburikidza neblog rako ingabva kune vanotsigira. Ivo vanowanzo email mablog mawebhusaiti ane akafanana hunhu hwebhizinesi ravo uye vanowanzo tsigira iyo blog nzvimbo.
Unogona Kuziva Kuti Kuridza Mimhanzi PaGitare January 15, 2022
5 Nzira dzekuwana Mari Online nekukurumidza January 11, 2022
17 Nzira Dzakagadzirwa Kuita $100 Zuva January 11, 2022
11 Nzira Dzakavimbiswa Kuita Mari Pamhepo January 11, 2022
Gamuchira Mari PaIndaneti January 11, 2022
Tora Mari (98)
Mobile Vanofarira (24)
Movie Vanoda (3)
Nhau Junkies (5)
Kutamba mitambo (5)
Verenga Emails (1)
Tsvaga paWebhu (23)
Social Media Vanofarira (14)
Kufamba Buffs (5)
Vanoda TV (4)
Ona Mavhidhiyo (72)
Vamwe vari kuverenga:AppleunlockTmc appAppleunlockerVolte sip meseji sms kubata uye kuteereraSpymaster proMaitiro ekuona chiitiko pane yako routerNu votNyika dzaunogona kushanyiraGhostctrl apkAyiwwmqzBhjkwuyvGhostctrl kudhawunirodha
chando | Powered by WordPress